I-Portulac, Ukunyamekela nokuzaliswa
I-Rod Portulak - isityalo sonyaka okanye esingapheliyo esinamaqabunga esityalo esihlala kwintsapho yama-lobster. Eli hlobo luneentlobo eziyi-100-200 ngokwemiqathango eyahlukeneyo, eqhelekileyo kwimimandla esezantsi kunye neyesropila zombini we-hemispheres. E-Portulaca ngononophelo kunye nokuveliswa kwazo ezichazwe ngezantsi, ukunyuka okanye ukusabalalisa iziqu. Amagqabi aphantse echasene okanye aqhelekileyo. Iintyatyambo zikhangeleka, ngamanye amaxesha zininzi ezinkulu.
I-Orchard Portolac - isityalo sonyaka, sisasazwa ngendlela yokhula yonke indawo. Amagqabi amancinci kunye neziqu ezisetyenziselwa njengesaladi.
I-porcelain enkulu enamanzi iyisityalo se-ornamental sineentyantyambo ezinkulu eziqaqambileyo. Umhlaba wasezantsi wezilwanyana yiBrazil neArgentina. Kuyafaneleka ngokufanelekileyo kwimibhobho yeentyatyambo, kodwa ingakhula kwi-floriculture yangaphakathi.
I-Portulak iyisityalo esineziqhamo ezinokuthi zibekwe kwiipatato zesitrato, iifestile, iibhokisi zeefestile, iibhasiki ezixhoma, ibhokisi yebhokisi.
I-purl enkulu enamanzi iyasetyenziswa ngokubanzi kwi-design design. Wawutyala kwiibhedlele zeentyatyambo, i-flowerbeds, kwiimvundla, ukugcina iindonga zamatye, iindonga ezomileyo, kwii-rockeries ezihlangene ze-slabs zekhonkrit. Ukuba i-portolac ityalwe ngotshani elomileyo, iya kuthi ithathe indawo yetshontshi.
Ubomvu obukhulu. Umhlaba wasezantsi wezilwanyana nguMzantsi Melika (Uruguay, Argentina, Brazil). Le ntlobo yityalo isityalo esingapheliyo (kodwa isetyenziswe rhoqo njengesityalo sonyaka) ngeesibhakabhaka esifanayo, indawo yokuhlala okanye izitshixo eziqhelekileyo ezikhula zibe ngamasentimitha angama-30. Amaqabunga amancinci, iinyama, ubude buya kuma-25 mm, kwaye ububanzi buya kuma-2 centimitha.
Kulo lonke ihlobo, isityalo sinika iintyatyambo ezinye, ububanzi bufikelela kuma-3-4 centimitha. Iintyatyambo zingaba zi-shades ezahlukileyo-ezivela kumhlophe ukuya kumhlophe okanye zibomvu-lilac.
Umbono wokuqala we-portaloque obomvu ube ngumhlobo wesiseko sokuqala ukubonisa inani elikhulu lemibala eyahlukileyo yembala eyahlukeneyo kunye ne-aureole ephindwe kabini okanye elula.
Iyalinywa ngokukodwa ngendlela yesityambo sokunquma. Kwimibala yeentlobo zezi zityalo, iintyatyambo zivulekile kwimozulu yelanga ngelilanga. Nangona kunjalo, kukho iintlobo ezahlukahlukeneyo kwiintsuku zeentyatyambo ezihlala zivulekileyo, iintlobo zeentyantyambo ze-terry, ezi ziintlobo - i-Cloudbeater, i-Sundance, i-Sunglo.
I-porcelain yasegadini ngumnyaka owodwa, isityalo esinezityalo ezinomileyo, esasasazeka kwihlabathi lonke. Ukuphakama kwesi sifo sikhula sibe ngama-10-30 amentimitha. Uye waqina ngokugqithiseleyo obomvu, umquba, ukuhamba ngezintlu kunye nomhlaba okanye ukuxilongwa, i-cylindrical stems. Iintshontsho zesinyile, inyama, i-1.5-3 cm ubude, kunye neziphetho ezingamatshumi amathathu, i-oblong-spatulate. Kwiimfestile zamagqabi aphezulu kwihlobo, iintyatyambo ezincinci zenziwa, zingabomnye, okanye zihlanganiswe ngeentyantyambo ezi-2-5. Iintyatyambo zezi ntlobo zinemibala ebomvu. I-corolla yeentyantyambo kwi-dimer i-7-8 mm, ine-4-6 obovate i-petals, i-calyx yeentyatyambo ibunjwa ngamabini amabini. Iintyatyambo zezimbali ze-portal-June-Agasti.
I-Portulak idinga ukukhanya okukhanyayo kwemitha ngqo yelanga, kuphela kule ngxaki iya kutyatyambo. Ukuba isityalo sikhula egumbini, ke kucetyiswa ukuyibeka ecaleni kwewindow eseningizimu. Ikhula ngaphandle ngaphandle kwiibhokisi okanye kwibhokisi.
Iqondo lokushisa likhetha ukufudumala, malunga nama-20-26 degrees, kule bushushu, ukukhula okuphumelelayo kuqinisekisiwe.
Ukucoca i-lacquer kufuneka ihlaziye rhoqo, kodwa ukuba isityalo sisebhodweni okanye kwisitya, ukuthambisa kufuneka kube ngokulinganayo kwaye rhoqo.
Xa kufakelwa, isityalo esingafunekiyo, kuba le sityalo sinokukhula kwiindawo ezihlwempuzekileyo.
I-Portulacus ihlwaye ngoMatshi. Enyanisweni, kwincwadi yeentyatyambo kuthiwa kunokwenzeka ukuhlwayela kwimimiselo yangaphambili - ama-3 eminyaka kaFebruwari, kwaye emva koko-1 iminyaka eyi-1 ku-Epreli. Ukuhlwayela kwenziwa kwiindawo zokugcina izityalo ezincinci phantsi kokukhanya okukhanyayo kunye nama-20-25 degrees Celsius.
Kwi-greenhouse ngosuku olushushu, ukushisa komoya kungama-50 ° , okukhuthaza ukukhula ngokukhawuleza. Ukungabikho kokukhanya kukukhokelela ekubeni izityalo ziya kuqala ukunweba. I-Teplichku ingakhiwa kwi-aquarium eyenziwe nge-plexiglas. Phezulu kwe-aquarium kufuneka ifakwe ifilimu entsha (i-polyethylene) kwaye uyibeke kwindawo eqaqambileyo. Ukuqinisekisa ubungakanani obaneleyo bokukhanya, ungasebenzisa isibane se-fluorescent okanye iqhekeza eliqhelekileyo lama-40-60W. Ngokukhanya okukongeziweyo, isityalo, njengomthetho, sidinga ixesha langokuhlwa nakusihlwa, ngelixa kwimozulu efufayo isityalo sifuna ukukhanya yonke imini.
Imbewu ingahlwayelwa kwizimbiza ezincinci zeplastiki, kule meko imbewu ithathwa kancinci. Sizalisa i-gravel encinci kunye nesihlabathi esinqabileyo phantsi kwetanki, ngaloo ndlela sakha umjelo, ngoko sizalisa isitsha kunye ne-substrate. Kulo mhlaba akufuneki kubekho izichumisi kunye ne-peat. Ukuba imbewu ihlwayelwe kwilizwe apho kuya kubakho i-peat, abayi kunyuka. Yaye ukuba iziqu ezichumayo zikhona emhlabeni, izityalo ziya kuhlakulela izifo zenyama kunye nokufa. Ukubunjwa komhlaba kungafaka isanti kunye nobukhulu be-0.1 mm (20% engaphezulu), ilahle (ukuba umhlaba ukhululekile, unomxholo ophezulu wodongwe). Isitya esinomhlaba sifanele sibekwe kwisitya se-drip, esele sigcwaliswe ngamanzi amile, soloko esithambileyo, njengoko amanzi anzima ayanciphisa ukuhluma.
Emva kokuba umhlaba ube manzi, ungaqala ukuhlwayelwa - emhlabeni umhlaba imbewu ibhalwe ngomdlalo omanzi. Kule meko, imbewu kufuneka ifakwe emhlabathini nge-1 mm. Imbewu yalala, ukusuka kwelinye kwelinye kwi-centimeter distance, kwaye ngokukhawuleza kufakwa kwi-greenhouse. Ukuba isitya kunye nezityalo asikhanywanga ngokukhanyisa izibane kwaye asiyi kumafestile, kwaye ngokukhawuleza ukuba ininzi yezimbewu zivela emhlabeni, kufuneka zisuswe kwi-greenhouse kwaye zifakwe kwiwindow, zisondele kwiglasi. Ukukhanyisa okongeziweyo kuqhutyelwa ngqo kwi-greenhouse, kunye nesiqhekeza esivulekileyo. I-bulb ye-40W kufuneka ifakwe ngaphezu kwehluma kwi-10-15 cm ubude, i-60W kumgama we-15-20 cm. Ukuba ngobusuku ifestile iyabanda, izityalo zifakwe kwi-greenhouse ngelo xesha (azifihla) kwaye zigqityiwe, kwaye kusasa zifakwa iwindow. Umhlaba kufuneka ungomile.
Khumbula, isityalo sithanda ukufudumala, ngoko ungavumeli ukushisa kwehla ngaphantsi kwama-degrees angama-20 kwisityalo esitsha ngokutsha, emva kweveki ukushisa akufanele kube ngaphantsi kwe-16 °, emva kokuvela kwamagqabantshi ayisithandathu, ukushisa akufanele kuwele phantsi kwe-10 ° C (ukushisa okuphantsi kuya kubangela kwinto yokuba amaqabunga aqala ukuwa).
Ukunyamekela nokuveliswa kweenja zaselwandle akufanele kubangele naziphi na iingxaki ezikhethekileyo, kuba isityalo asiqhelwanga nakwizinambuzane.
Iintlanzi zeNdlu yaseAnthurium
Ubisi lwe-Milk, isicelo
Unyango lwezilwanyana zamagrafraine
Ifowuni yefowuni: enhle okanye embi?
UGillian Anderson kunye neesahluko 9 kwizinto zakhe eziyimfihlo
I-Apple pie ngeziqhamo
Iintlobo kunye neepropati zodaka zokwelapha
I-pollock ijikeleze kwaye i-elastic
Ziziphi izipho ezinikezelwa ngabasetyhini ngoMatshi 8
Indlela yokuphefumula nokuphumula xa uzalwa?
Kutheni amadoda efuna ukuba yintando yokuqala yintombazana?